Joany 4 - Ny Baiboly
Joany toko 4
Jesoa sy ilay vehivavy Samaritana - Ilay zanakalahin'ny manamboninahitra tao Kafarnaoma.
1Nony fantatry ny Tompo fa ren'ny Farisiana hoe maromaro kokoa ny mpianatr'i Jesoa sy ny olona ataony batemy noho ny an'i Joany 2- na dia tsy izy aza fa ny mpianany no nanao batemy ny olona, - 3dia niala tany Jodea izy ka nankany Galilea indray. 4Ary tsy maintsy hamaky an'i Samaria izy, 5ka tonga tany amin'ny tanànan'i Samaria anankiray atao hoe Sikara, akaikin'ny saha nomen'i Jakoba an'i Josefa zanany; 6teo no nisy ny fantsakan'i Jakoba. Ary sasatry ny dia nalehany Jesoa ka nipetraka tsotra izao teo amoron'ny fantsakana, tokony ho tamin'ny ora fahenina.
39Maro ny Samaritana tamin'izany tanàna izany no nino azy, noho ny tenin-dravehivavy nanao hoe: Nolazainy tamiko avokoa ny nataoko rehetra. 40Fa nony tonga teo aminy ny Samaritana, dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ary nitoetra tao indroa andro izy. 41Ka vao mainka maro aza no nino azy noho ny teny nataony, 42sy nanao tamin-dravehivavy hoe: Tsy noho ny filazanao intsony no inoanay fa ny tenanay izao no nandre, ka fantatray fa izy tokoa no Mpamonjy ny olona.
43Nony afaka ny indroa andro, dia niala tao izy ka nankany Galilea. 44Fa araka ny efa voalazany dia tsy misy mpaminany hajaina amin'ny taniny. 45Ary nony tonga tany Galilea izy, dia noraisin'ny Galileana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro fety, fa tany koa izy ireo tamin'ny fety.
46Dia nankany Kanà any Galilea indray izy, tany amin'ilay nanovàny ny rano ho divay. Ary nisy kosa manamboninahitra anankiray nanan-janakalahy narary tany Kafarnaoma, 47ka nony reny fa hoe tonga avy any Jodea ao Galilea Jesoa, dia nanatona azy izy ka nangataka azy hidina hanasitrana ny zanany efa ho faty. 48Fa hoy Jesoa taminy: Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana hianareo, dia tsy mba mety mino; 49ka hoy ilay manamboninahitra taminy: Andeha re, Tompoko dieny mbola tsy maty ny zanako. 50Dia hoy Jesoa taminy: Modia, fa velona ny zanakao. Ary nino ny teny nolazain'i Jesoa taminy izy ka lasa nody. 51Nony nandeha izy, dia notsenain'ny ankiziny, ka nilazany fa velona ny zanany. 52Ary nanontaniany azy ireo ny ora nahasitranany ka hoy ireo taminy: Omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. 53Dia fantatry ny rainy, fa tamin'izany ora izany indrindra no nilazan'i Jesoa taminy hoe: Velona ny zanakao, ka nino izy sy ny mpianakaviny rehetra. 54Izany no fahagagana faharoa nataon'i Jesoa, rahefa tonga tany Galilea avy tany Jodea izy. >